Centara na KMA Group Banyere HMA maka New Myanmar Resort
Home » Nkwari akụ na nkwari akụ » Centara na KMA Group Banyere HMA maka New Myanmar Resort
Centara Hotels & Resorts, Onye isi na-ahụ maka ụlọ nkwari akụ na Thailand, na KMA Group, onye enyemaka nke Kaung Myanmar Aung (KMA) Group of Companies, bịanyere aka na nkwekọrịta Njikwa Hotellọ oriri na ọ HotelụMAụ (HMA) na Bangkok maka njikwa ụlọ ọrụ ọhụrụ na Myanmar nke ndị KMA nwere. Ihe onwunwe ahụ, nke dị n'otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya kachasị ama na mba ahụ, ga-edegharị ma jikwaa ya n'okpuru akara Centara malite n'afọ a.
95-igodo Centara KMA Resort Inle Lake, nke dị n'ụsọ Oké Osimiri Inle nke dị n'etiti Myanmar, ka emepere n'oge nke anọ nke 2019.
Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịga n'ihu na mmekorita ya na KMA Hotels, otu n'ime ụlọ ọrụ nnabata ọbịa na Myanmar, "kwuru Thirayuth Chirathivat, onye isi oche nke Centara Hotels & Resorts. "Nkwekorita a na enyere Centara aka iguzosi ike n'obodo nke nwere oke uto maka njem njem, ma soro ndi KMA nwere oke oru."
KMA Group of Companies bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nzuzo nke onye isi ala U Khin Maung Aye, onye isi oche nke Bank Bank. Otu a gunyere ulo oru ulo oru iri na ise na aru oru di iche iche.
"Obi dị anyị ụtọ ịnwe Centara ike ika na mba management nka na-abịa n'ụgbọ na ọhụrụ resotu ihe onwunwe," kwuru Khin Maung Aye, Onye isi oche nke KMA Group. Ekwenyesiri m ike na ọnụnọ Centara na Myanmar ga-enyere aka ịhụ na mba ahụ nwere ikike zuru oke maka njegharị ndị njem ma mee ka ụlọ ọrụ KMA na-aga n'ihu na azụmahịa.
Centara bịanyere aka na MOU na KMA na mbido afọ a maka njikwa ụlọ oriri na nkwari akụ isii na Myanmar. Nkwekorita oru ohuru a na-anọchi anya mmezu nke ihe a maka ihe mbu nke ihe ndi a na ndi ozo iji soro.
Myanmar bụ mba nke abụọ kachasị ukwuu na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia ma nwee otu n'ime akụ na ụba na-eto ngwa ngwa na mpaghara ahụ. Onu ogugu onu ogugu ndi njem nke Myanmar bu 8.5% kwa afo site na 2025 na etinye obodo ahu elu nke ahia ahia ndi mmadu na-eto ngwa ngwa.
Mgbakwunye nke ihe onwunwe ọhụrụ nke Myanmar bụ ihe akaebe ọzọ nke atụmatụ mgbasawanye nke Centara, yana njikọta nke Centara na njikwa KMA nke mmepe mmepe ga-eme ka ngalaba ile ọbịa nke Myanmar bulie.
Minista njem nleta Bartlett zutere onye nwe Jamaica Tallawah
The Seychelles Islands na-eme ememme kwa afọ "Ọgwụgwụ Na-adịghị agwụ agwụ" n'okporo ụzọ na mpaghara CIS